Ihunanya di na Alacati, na Turkey | Akụkọ Njem
Romanticzọ ịhụnanya dị Alacati, na Turkey
Coastsọ mmiri Turkish bụ oke njem maka ezumike ma ọ bụ iji zuru ike ruo ogologo oge izu ụka. Osimiri Aegean ma ọ bụ Bosphorus ka na-ekpo ọkụ na Ọktọba ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhapụ n'etiti oge a ka enyere ebe a.
Coastsọ mmiri turkish o nwego ikuku na coves ya na-ezobe obodo ndị nrọ na ụlọ nkwari akụ. alacati bụ otu n'ime ha, a ọmarịcha obodo nta na ị nwere ike itinye na ndepụta gị nke ebe maka njem mmekọrịta ịhụnanya ma ọ bụ ezumike.
2 Otu esi aga Alacati
3 Ebee ka ịnọ na Alacati
4 Ihe ị ga-eme na Alacati
Ọ bụ obodo dị n'ụsọ osimiri dị na mpaghara Izmir nke Turkey, n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ na Aegean. E hiwere ya na 1850 mgbe e webatara ndị ọrụ Greek Ottoman site na agwaetiti iji kpochapụ ala ịba. Ozugbo ọrịa ahụ lara, ndị mmadụ kpebiri ịnọ ma bido obodo na ndụ ọhụụ, yabụ na-eji anyanwụ, ala na-eme nri na ifufe siri ike, malitere ito.
Ya mere, ruo otu narị afọ na ọkara nke ubi vaịn ya, ihe owuwu oge ochie ya na ihe igwe ya na-adọta ndị ọbịa. Ha abanyela na afọ ndị na-adịbeghị anya site n'aka ndị na-eme kitesurfing ma ọ bụ windurfing, n'ihi ike nke ifufe. Ọ dị kilomita 72 site na obodo Izmir n’onwe ya, nke dị na nsọtụ Cesme peninshula, ma nwee ọmarịcha ụlọ nke ụlọ okwute na n'okporo ámá ndị dị warara nke taa nwere ụlọ ahịa, ụlọ nri na ụlọ nkwari akụ. Obodo a aghọwo ihe a ma ama na enwere ebe obibi 80 ụdị a, gụnyere gọọmenti rụrụ na họtel.
N'etiti narị afọ nke iri abụọ, onye bu ụzọ nke UN, Njikọ nke Mba, nyere iwu ka a gbanwee ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ mgbe emechara Agha Turkey nke Abụọ nke ndị Alakụba si Balkans wee laghachi n'obodo ndị Gris wee laghachi n'ụlọ ha. Echefuru obodo ahụ n'ime oge ruo ọtụtụ afọ wee si otú a chekwaa ya ma maa mma. Taa ọ dị ezigbo njegharị ma yabụ, ọ bụrụ na ịgbanahụ oge ọkọchị, n'oge mgbụsị akwụkwọ, ọ na-aghọ ebe dị jụụ karị ileta.
Otu esi aga Alacati
Anyị kwuru na obodo nta ahụ dị nkeji 45 site na Izmir, ihe dị ka nkeji 45 site na Istanbul. Nwere ike iji ụgbọ elu gaa Izmir kwa afọ site na isi obodo Turkey site na ọnụego site na euro 37. E nwekwara ụgbọ elu ndị ọzọ si n’obodo ndị ọzọ dị na Europe.
Enwere tagzi si n'ọdụ ụgbọ elu Izmir ruo Alacati ihe dị ka euro 16 ma e nwekwara ọrụ ụgbọ ala Havas.
Ebee ka ịnọ na Alacati
Enwere ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari. Dịka ọmụmaatụ, Manastir, ụlọ nkwari akụ kachasị ewu ewu dịka ụka, nwere ibo ụzọ na arịa ọcha. Ọ na-enye ụlọ iri na asatọ dị gburugburu ọdọ mmiri dị mita 18 na ọnụego sitere na 25 Turkish lira (450 euro), ọnụ ọgụgụ dị elu, 137 (550 euro) uwe ahụ na 167 (800 euro), Deluxe Suit. Ahịa dị maka Ọktọba. Gụnyere ụtụ isi, minibar na nri ụtụtụ.
Ọzọkwa enwere ụlọ oriri na ọ familyụ familyụ ezinụlọ dị ezigbo mma, dịka ọmụmaatụ thelọ nkwari akụ 1850, nke na-arụ ọrụ na ọmarịcha ụlọ narị afọ nke 20, weghachiri ma mezie ya. Ọnụ ego dị ọnụ ala karịa nke mbụ wee gụnye nri ụtụtụ na ụtụ isi (n'etiti euro 30 na XNUMX). Enwere ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ na ụfọdụ dị ezigbo mma ma nwee ezigbo ọnụahịa yabụ ọ bụrụ na ị kpebie na Alacati n'ọhịa ahụ, ị ​​kwesịrị ime nyocha nke ọma iji nweta ọnụahịa kacha mma.
Ihe ị ga-eme na Alacati
Lọ nkwari akụ dịgasị iche iche na nke ukwu na obodo na-eme ka oge ezumike dị jụụ. Ha nwere ọdọ mmiri, ha mara mma, ụfọdụ wuru n’elu elu na ihe niile mara mma. Ndị mmadụ ka na-ahọrọ iji oge ehihie ha eme ihe na osimiri nke peninshula, na-acha ọcha ájá, na-asa na kristal na dịtụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
E nwere ọtụtụ ọmarịcha osimiri ma ị nwere ike ịbanye na kpakpando bọlbụ bụ onye bịara na oge ịhapụ ndị na-ese foto a ma ama. Na Osimiri na-atọ ụtọDịka ọmụmaatụ, ọ dị oke ma buru ibu: mmiri na-egbuke egbuke nke nwere oke aja aja, ị nwere ike ịgbazite sunbed na nche anwụ, obere ụgbọ mmiri maka ije ma ọ bụ ngwa ikuku ikuku. Mana enwere ọtụtụ ndị ọzọ. Na Kum osimiri Ọ bụ otu n’ime ime obodo kacha nso ma bụrụkwa ezigbo enyi. Na Ilica osimiri O nwere ọkọlọtọ Blue na otu n’ime mmiri kachasị ewu ewu ma sie ike. E nwekwara Osimiri Marrakesh.
N'oge mgbụsị akwụkwọ, ọ bụrụ na ịchọrọ iji eziokwu ahụ bụ na ọ naghị ekpo ọkụ dị ka ọnwa Julaị ma ọ bụ Ọgọstụ, ịnwere ike ịkwọ ụgbọala ma chụga mara ubi vaịn nke dị naanị nkeji iri na ise. Cesme Bagcilik's mara mma ma nwee ụlọ elu nyocha nke na-enye gị nnukwu echiche panoramic mgbe ị na-anụ mmanya ha. Ga n'ihu na gastronomic-efegharị efegharị na mgbụsị akwụkwọ, na Ememme Flavour site na usoro isi nri na ọdịnala nri sitere na Aegean, ngosiputa, nnwale na ebe obibi.
Banyere njem mmụta dị gburugburu ị nwere ike ịdebanye aha maka njem ma mara nke ochie mkpọmkpọ ebe nke obodo Pergamon, Ihe Nketa Worldwa, nke nwere ihe nkiri Helleniki nke e wuru n’elu ugwu nke malitere na narị afọ nke atọ BC Ma ọ bụ ọbụna laghachi azụ Izmir, obodo nke nwere ebe nlegharị anya nke ya: ụlọ alakụba Yali, locklọ Elu Elekere 1901, Ebe Ngosi Ihe Mgbe Ochie nke Oge A, ogige anụ ọhịa ya ma ọ bụ zoo.
Efisɛ Ọ bụ ebe ọzọ dị mma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Pompeii. Obodo Greek sitere na narị afọ nke iri BC, ọ bụ Roman na mgbe ahụ Byzantine n'ihi ya enwere narị afọ nke akụkọ ntolite n'etiti nkume ndị ahụ. Ọnụ Gatezọ ofmá Ọgọstọs na Ọ́bá Akwụkwọ Celsus dị ebube na Great Amphitheater nwere ikike maka puku mmadụ iri abụọ na ise nọdụrụ ala na-ewepụ ume gị.
Na nkenke, ụsọ oké osimiri Turkish na-ezochi ebube ndị a na ọtụtụ ndị ọzọ. Uru dị na ịga ileta Alacati n'oge mgbụsị akwụkwọ bụ na ọnụ ahịa na-ada, okpomọkụ na-ada na ọnụọgụ ndị njem na-ada.. Hotelslọ oriri na ọ coụ areụ ndị ahụ mara mma, n'okporo ámá ha mara mma nke nwere ebe a na-ere kọfị na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ yana ọdịdị ala ha na-ejigide mma ha ọbụna na Nọvemba. Ndi ezumike ha nogidere na nkiti? Alacati nwere ike ịbụ azịza ya ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Ihunanya » Romanticzọ ịhụnanya dị Alacati, na Turkey
Ihe ịga leta Marrakech